रमेश प्रसाईको लामो आयु माग्दै पत्नी नन्दा, भिडियो अपलोड गर्ने बितिक्कै भाइरल (भिडियो सहित) – Ap Nepal
यसअघि लाइभ दो’होरी गाएपछि गायिका कल्पना दाहालसँग रमेशको नाम जोडिएको भएपनि कल्पना र रमेश मिल्ने साथी मात्र थिए । उक्त समयमा पनि रमेश र नन्दा गहिरो प्रेम सम्बन्ध’मा नै थिए ।
विवाहपछि नन्दा र रमेश टिक’टिकमा निकै नै छएका छ्न । उनीहरूलाई टिकटि’कमा निकै नै रुचाएका छ्न जसरी उनीहरू’लाई बाहिरी दुनियाँमा रुचाउँछन् । नन्दा र रमेशका भिडियो’हरु अहिले टिकट’कभरी भाइरल नै बनेका छन ।
नवजोडिले पछिल्लो समय टिकटि’कमा तहल्कै मच्चाएको छ । २४ घण्टामै १० लाख भन्दा बढी भ्युज पाएको यस भिडियोमा १ लाख १३ हजार भन्दा बढी त ला’इक नै रहेको छ । त्यस्तै यहाँ ५ सय भन्दा बढी त निकै नै राम्रा राम्रा प्रतिक्रिया रहेका छ। अब प्र’स्तुत छ सोही भिडियो ;
Prevभगवानसँग तपस्या गरेर मागेकी बुहारी यति मजाकी , आमाले गरिन बुहारीको यति धेरै तारीफ (भिडियो सहित)
सकियो तनुहु अदालतमा पल शाहको थुन छेक बहस | वकिल के भन्छन ? के आयो निर्णय ? ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )